मेरो कान मा दुखाइ कुन कुराले मदत गर्नेछ: लोक उपचार
परम्परागत चिकित्सा आफ्नो व्यञ्जनहरु मा धनी छ। रोगहरु को एक किसिम बाट औषधीको प्राकृतिक सामाग्री देखि धेरै शताब्दीयौंदेखि प्रयोग गरिन्छ। सबैलाई आफूलाई लागि हालतमा चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
आधुनिक चिकित्सा ठूलो प्रगति भएको छ। निदान र उपचार को आफ्नो विधिहरू मानिसहरूको हालतमा प्रतिस्थापन छैन। तथापि, तिनीहरूले पारंपरिक लागूऔषधको प्रभाव बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले डाक्टर भ्रमणमा हरेस छैन। मात्र उहाँले अप्रिय लक्षण को कारण निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ।
डाक्टर कान मा दुखाइ को उपचार को एक परम्परागत योजना prescribes। लोक उपचार पनि स्वास्थ्य हेरविचार पेशेवर चयन गरियो। कान रोग पछि फरक हुन सक्छ। सही चुनिएको को उपाय, अवस्था बढन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि नुस्खा को स्वतन्त्र लागू गर्न असम्भव छ। यो माथि दुःखी र पुनःस्थापना समय एकदम वृद्धि हुनेछ अन्त गर्न सकेन।
कान मा दुखाइ को कारण
बेचैनी धेरै को कारण, त्यसैले तपाईं कान मा दुखाइ सही नुस्खा चयन गर्न आवश्यक छ। लोक उपचार अवस्था कम र पुन: गति अप गर्न सक्नुहुन्छ। तर सही निदान र पर्याप्त चयन खुराक को मामला मा।
रुग्णता को कारण कान नहर को सुनिंनु वा सल्फर blockage को एक किसिम हुन सक्छ। तर, अन्य रोगहरु पनि लक्षण देखाएको गर्न सकिन्छ। यी उदाहरणका लागि, sinusitis समावेश गलसुआशोथ समावेश। कान मा दुखाइ कारण छ कि रोगहरु को सूची, sinusitis, गलसुए र चिबुक असामान्यताहरु को सुनिंनु समावेश गर्नुपर्छ।
neuralgia को पनि केही प्रकार, मेरुदण्ड रोगहरु लक्षण देखाएको छन्। कान दुखाइ को लागि एक लोक उपचार छनौट, डाक्टर खातामा यसको घटना को कारण लिन आवश्यक छ।
कान दुखाइ को सबै भन्दा साधारण कारण सुनिंनु, वा otitis मिडिया छ। यो बाह्य हुन, वा आन्तरिक (ज्यादातर) मध्यम गर्न सक्नुहुन्छ। एक भेद पनि पुरानो र तीव्र otitis मिडिया छ। यो अक्सर सर्दी, माथिल्लो श्वसन पर्चा संक्रमण गराउँछ। श्वसन रोगहरु संग संघर्ष, यो कान मा दुखाइ निको पार्न आवश्यक छ। उपचार को लोक उपचार को प्रयोग समावेश compresses, वार्मिंग लोशन र अन्य प्रक्रियाहरु।
तर तपाईं यो purulent otitis यस्तो प्रक्रिया मा निषेध गरिएको छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। तपाईं कान मा सुनिंनु कस्तो विकास जान्नु आवश्यक छ। swimmers मा, उदाहरणका लागि, अक्सर otitis मिडिया निदान छन्। कारण कान नहर छाला मा पानी संग बारम्बार सम्पर्क गर्न नरम र susceptible भाइरस र संक्रामक एजेन्ट को एक किसिम को प्रवेश गर्न बन्नेछ।
आफ्नो डाक्टर भ्रमण र रोग को प्रकारको कान मा दुखाइ को कारण के, लोक उपचार को उपचार एकदम प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ पत्ता। परम्परागत औषधी जस्तै नुस्खे एकदम रिकभरी समय कम संग संयोजन मा।
कान दुखाइ विरलै सहन नसकिने छ। त्यसैले, यो आकस्मिक उपायहरु लिन छैन आवश्यक छ। तर तपाईं सकेसम्म डाक्टर हेर्न आवश्यक छ। परम्परागत व्यञ्जनहरु कान नहर फरक infusions निस्तब्धता समावेश। सबै भन्दा लोकप्रिय विधिहरू न्यानो र inhalation छन्।
यो रोग को कारण पराजित गर्न भन्दा लक्षण सामना गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा दूर र दुखाइ जानुहोस्। तर उपचार मात्र प्राकृतिक व्यञ्जनहरु रूपमा परम्परागत विधिहरू रूपमा प्रभावकारी छैनन् छ। त्यसकारण, तिनीहरूले संयोजन मा प्रयोग गरिन्छ।
वयस्क र बच्चाहरु को लागि earache लागि लोकप्रिय लोक उपचार को आधारमा तयार छन् camphor तेल, प्याज, बदाम तेल, अखरोट, बिरुवा, मह। यो सम्भव एजेन्ट को एक exhaustive सूची छैन।
otitis मिडिया एक विद्रधि रूपमा निदान छ भने, यो प्रक्रिया बहिष्कृत छ। तर अन्य अवस्थामा एकदम प्रभावकारी वार्मिंग। रोगी एक उच्च तापमान हुँदैन। अन्यथा, यो एकदम वार्मिंग वृद्धि हुनेछ।
यदि earache, लोक उपचार को बेचैनी सुख हुनेछ। एउटा सानो झोला (उपयुक्त पनि साधारण मोजा) ले। यो एक पैन तालिका नुन वा बालुवा मा गरम खन्याउन। न्यानो तापक्रम निकै ठूलो छ भने, एउटा सानो झोला एउटा रुमाल राख्छ। यो धेरै पटक जोडेको छ। को ठंडा सामग्री ऊतक तहहरू कम रूपमा (क रुमाल फैलाउनु)। यो प्रक्रिया 10 मिनेट को लागि गरियो। माथि वार्मिंग एक दिन 2-3 पटक गर्नुपर्छ। यसरी यो न्यानो तापक्रम छैन उच्च थियो आवश्यक छ। झोला न्यानो, तर तातो छैन हुनुपर्छ।
धेरै मानिसहरू (विशेष गरी चिसो मौसम मा) यदि रुचि earache, के गर्ने? लोक उपचार compresses समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई लागि, विभिन्न सामाग्री आवश्यक छ। एक लोकप्रिय नुस्खा camphor तेल, नुन र अमोनिया संयोजन छ।
यो दबाइ बारेमा एक वर्ष को लागि एक अँध्यारो सुक्खा ठाउँमा भण्डारण गरिएको छ। यसको तयारी चमचा लागि न्यानो पानी 1 लीटर साल्ट। समाधान हलचल। अर्को, अमोनिया (10%) र 10 ग्राम camphor तेल को 100 ग्राम तरल मा हालिएको छ।
ढक्कन बन्द गर्न बैंक। समाधान homogeneous हुन्छ सम्म उनको हल्लाइन्छ। एक सानो कपास swab यो उपकरण संग moistened र कान मा राखे। दिन को समयमा प्रक्रिया 3-4 पटक दोहोर्याइएको थियो।
पुनर्वास लागि अर्थ
अक्सर, पछि suppurative otitis यो सिस्टम पूर्ण रूपमा बरामद गरिएको छ केही समय चाहिन्छ। यसरी पुनर्वास हालतमा बिरुवा हुन सक्छ। यो earache लागि एक लोकप्रिय लोक उपाय छ। यो सुनेर पुनर्स्थापना र रोगी गर्न स्वास्थ्य बहाल गर्न मदत गर्नेछ।
बिरुवा को यो उद्देश्य 30 G लागि राम्रो shavings nastrogat गर्नुपर्छ। यसको खन्याउन 100 G मदिरा दल्नु (70% बल)। मिश्रण कहिले काँही मिलान, सप्ताह जिद्दी। अर्को, फिल्टर र घरेलू ग्याजेटहरू बनाउन। कपास ऊन वा gauze tincture संग moistened र कान मा दृढ राखे।
प्रक्रिया प्रति दिन 1 समय गरिन्छ। को tampon 2-3 घण्टा कान मा रहनेछ। उपचार को पाठ्यक्रम 15 दिन छ। प्रदर्शन प्रक्रियाहरु छोड्न सिफारिस गरिएको छैन। अन्यथा पुनर्वास प्रक्रिया ढिला हुनेछ, र रोग एक पुरानो फारम मा विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
एक विदेशी वस्तु कसरी हटाउने
कहिलेकाहीं कान मा दुखाइ विदेशी वस्तु, कीरा द्वारा मारा भइरहेको कारण छ। र यो समस्या बच्चाहरु संग मात्र, तर पनि वयस्क हुन्छ। कसरी यस मामला मा earaches लोक उपचार उपचार गर्न, यो विवरण विचार गर्न आवश्यक छ।
सुरुमा, तपाईं वस्तु, अप्रिय लक्षण दोषी प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यो न्यानो वनस्पति तेल को एक सानो राशि (तातो छैन) को कान मा हालिएको छ। न्यानो पानी कोमल स्ट्रिम विदेशी वस्तु टाढा धुन।
यो एक कीरा हो भने, बोट राम्रो सट्टा propolisnoe तेल प्रयोग गर्न छ। यो एक ड्रप रूपमा लामो विना अधिकार घुस्ने व्यक्ति सतहमा जस्तो छैन रूपमा कान नहर मा हालिएको छ। यस मामला मा, व्यक्ति माथिको कान हो। वस्तु छाला क्षतिग्रस्त छ भने, तपाईंले उदाहरणका लागि, compresses वा लुगा धुने गर्नुपर्छ, hypericum को जलसेक।
कान मा दुखाइ लागि लोक उपचार अध्ययन, तपाईं अर्को नुस्खा विचार गर्नुपर्छ। को बेचैनी टाउको दुखाइ सँगसँगै जब यो प्रयोग गरिन्छ। यस मामला मा, हुन सक्छ कान मा हल्ला। यहाँ Heather मदत गर्न।
सुकेको जडीबुटी को चमचा पानी उम्लिरहेको को 0.5 लिटर पोखे। मिश्रण 10 मिनेट को लागि एक भाप स्नान मा गरम थियो। कन्टेनर माथि र्याप र 3:00 दबाइ जिद्दी गर्न त आवश्यक छ। नाली यो प्रति दिन 100 एमएल 1 समय सँग हप्ता पिउन, हो। त्यसपछि, यो औषधिको खुराक 200 एमएल वृद्धि भएको छ।2थप सप्ताह लिन चिकित्सा। त्यसपछि दस दिनको लागि एक ब्रेक बनाउन। पछि पाठ्यक्रम एक पटक थप बारम्बार थियो।
कर्णक्ष्वेड श्रवण को घटना थप उपचार रूपमा बिग्रन भने licorice र chamomile को जलसेक लागू गर्न सकिन्छ। को जलसेक प्याकेज निर्देशन अनुसार तयार छ। यसलाई 4-5 receptions सबै सामग्रीहरू पिउने, हरेक दिन पीसा छ। उपचार 10 दिनको लागि बाहिर छ। त्यसपछि रूपमा ब्रेक लागि समय नै रकम आवश्यक छ। पाठ्यक्रम फेरि दोहोर्याइएको गर्न सकिन्छ।
एक व्यक्ति cerumen impaction गठन गरेको छ भने, यो हानि सुनेपछि सक्छ। तपाईं पनि earache लागि उपाय आवश्यक हुन सक्छ। यस मामला मा लोक उपचार धेरै उपयोगी हुनेछ।
यो एक साधारण रोगको छ। प्रायजसो मा, हावाको स्थिति मा धूलो वा लगातार सञ्चालनको पानी सुरक्षा बिना खण्डमा संग स्थिर सम्पर्क कारण ट्यूब बढ्छ। cerumen impaction अझै गठन गरेको छैन, यदि तर यसको घटना एक सम्भावना छ, यसलाई न्यानो पानी संग कान धुन आवश्यक2पटक एक महिना छ। यो एक सिरिंज को माध्यम द्वारा भित्र हालिएको छ। Wherein टाउको तलतिर कान ढल्केको छ।
प्रक्रिया पछि, श्रवण नहरहरुमा राम्ररी ड्राई हुनुपर्छ। तपाईं एक हेअर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। न्यानो हावा प्रवाह कान मा निर्देशित छ।
प्लग पहिले नै गठन गरेको छ भने, न्यानो वनस्पति तेल च्यानलहरू संग धुन। कान मा प्रशासित धेरै घटेको, त्यसपछि eluted सिरिंज प्लग। प्रक्रिया एक दिन तीन पटक प्रदर्शन गरिएको छ। एक मिलान वा अन्य साना वस्तु आफ्नो कान सफा छैन। तिनीहरूले eardrum बिगार्न सक्छ।
आफ्नो स्वास्थ्य गर्न responsibly उपचार हुनुपर्छ। तपाईं मौसम, supercool छैन लागि ड्रेस गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईँ कान मा दुखाइ को लागि चिकित्सा आवश्यक छैन। लोक उपचार आवश्यक रोग को प्रकार अनुसार चयन गरियो। तसर्थ, आवश्यक कुनै पनि कार्य गर्न Committing अघि डाक्टर भ्रमण गर्न। त्यसपछि निको चाँडै र जटिलताहरू बिना हुनेछ।
प्लान्ट निकाल्ने। Echinacea को निको एजेन्ट को एक भाग हो
जोडहरुको लागि बकाइन को उपयोगी यदि tincture?
घरमा ozokerite प्रयोग गर्न कसरी र कहिले
कास्टिक सोडा र यसको आवेदन
स्टीफन राजा को सबै भन्दा राम्रो पुस्तक: सूची, दर्जा, वर्णन
सतावट उन्माद के हो?
छ-3 जहाँ पंच? सिफारिसहरू खेलाडीहरू